Ọdịnaya nke Gola Malitere ịrịa | Martech Zone
Mgbe m hụrụ ugboro iri ka ọtụtụ nje virus na-anwụ karịa ịlanarị, echeghị m na m bụ nnukwu onye kwere ekwe na enwere ụdị ụdị mmeri algorithm. N'eziokwu na ụfọdụ ụlọ ọrụ dị mma karịa ndị ọzọ… mana ekwenyeghị m na onye ọ bụla nwere ike ikwe nkwa usoro nje… belụsọ na ha etinye ego buru ibu na onyinye iji kwado ya. Nke ahụ kwuru, e nwere ụfọdụ àgwà dị iche iche maka usoro ịrịa nje.
Nchịkọta ọdịnaya nwere ike iwepụta ụfọdụ ụdị mmetụta uche sitere na ndị na-ege ntị ezubere iche nke na-akpali ha ịkọrọ ya na netwọkụ mmekọrịta ha. Nke a bụ otu ọdịnaya gị nwere ike isi si n'otu elele ruo ọtụtụ nde mmadụ!
via SingleGrain - Ọdịdị nke Viral Na-aga.
Tags: malitere ịrịamalitere ịrịa ahịanje virususoro njevidiyo vidiyo